Windows 11 သည်မည်သည့် Intel Mac နှင့်မှအဆင်ပြေမည်မဟုတ်ပေ၊ ငါက Mac ပါ
Windows 11 သည်မည်သည့် Intel Mac နှင့်မှအဆင်ပြေမည်မဟုတ်ပေ၊
Microsoft ကရက်သတ္တပတ်ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည် Windows ကို 11 တစ် ဦး ကဗုံးနှင့် platillo ။ ပထမ ဦး ဆုံးမေးခွန်းကတော့ Mac 10 မှာ Windows XNUMX လို install လုပ်လို့ရမလားဆိုတာပါပဲ။ ပထမဆုံး software ကိုစတင်စမ်းသပ်တဲ့အခါမှာတရားဝင်မဟုတ်ဘူး။ Intel ပရိုဆက်ဆာပါသည့် Mac များ၌ Apple Silicon အသစ်တွင်သိပ်မများပါ။
ဖြစ်နိုင်သည်မှာ Intel ၏တောင်းဆိုမှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်မကြာမီကပင် Apple ဆီလီကွန်စီမံကိန်းကိုလက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ရန်ကြိုးပမ်းနေခြင်းဖြစ်သည်။ နောက်ပြီးဆက်နွယ်မှုကဘာလို့လဲဆိုတော့ငါပြောတယ် Microsoft က y Apple သူတို့မဆိုးပါဘူး ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးတွေ့ခဲ့တာကတော့ Microsoft ကသူ့ရဲ့ Office ကိုဘယ်လိုပြန်ဖွင့်ပြီး Apple M1 ပရိုဆက်ဆာအတွက်မူရင်းဗားရှင်းကိုဖွင့်ထားတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ခဲ့ရတယ်။
ကြာသပတေးနေ့က Microsoft သည်၎င်း၏ကွန်ပျူတာလည်ပတ်မှုစနစ်၏နောက်ဆုံး update ဖြစ်သော Windows 11 ကိုထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။ အဆင့်မြှင့်ထားသောဒီဇိုင်းနှင့် emulated Android app များကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်ပြုလုပ်ထားသော်လည်းလူတိုင်းကမူဗားရှင်းအသစ်ကိုတပ်ဆင်နိုင်မည်မဟုတ်ပါ။ တကယ်တော့ Windows 11 သဟဇာတဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ တရားဝင် Intel ရဲ့ပရိုဆက်ဆာကိုအခြေခံထားတဲ့ Mac မရှိဘူး။
၀ င်းဒိုးကိုမတူကွဲပြားသောကွန်ပျူတာများဖြင့်လည်ပတ်သည်ကိုလူသိများသည်။ သို့သော်ယခုနှစ်တွင်မိုက်ခရိုဆော့ဖ်သည် ၀ င်းဒိုး ၁၁ ကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်ဟာ့ဒ်ဝဲလိုအပ်ချက်များကိုတိုးမြှင့်ရန်ရွေးချယ်ခဲ့ဟန်ရှိသည်။ ပိုမိုမြန်ဆန်ပြီးအနည်းဆုံး 11 GB RAM နှင့် 64 GB သိုလှောင်နိုင်သည့် DirectX 1 သဟဇာတဖြစ်သောဂရပ်ဖစ်ကဒ်နှင့်အထောက်အပံ့ရှိသည် TPM 2.0.
TPM 2.0 အမြီးကိုဆောင်ခဲ့ ဦး မည်
TPM, သို့မဟုတ်ယုံကြည်စိတ်ချရသောပလက်ဖောင်း module, တစ် ဦး ဖြစ်ပါတယ် chip ကို Mac ကွန်ပျူတာများရှိ Secure Enclave နှင့်ဆင်တူသည့် operating system လုံခြုံရေး၏သမာဓိကိုသေချာစေရန်ခေတ်မီကွန်ပျူတာ၏ motherboard တွင်ထည့်သွင်းထားသည်။ cryptographic keys၊ DRM စီမံခန့်ခွဲမှုစသည်တို့ကိုသင်ထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
ပြproblemနာကကွန်ပျူတာအားလုံးမှာမဟုတ်ဘူး TPM 2.0 ၎င်းသည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်တွင်စတင်မိတ်ဆက်ကတည်းကဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတပ်ဆင်ထားသည့် desktop PC သို့လာသောအခါ၎င်းတွင်ထည့်သွင်းနိုင်သော်လည်း၎င်းတွင် TPM chip မပါရှိသည့်အခွင့်အလမ်းများစွာရှိသည်။
Windows 11 မှာ TPM 2.0 chip ကိုသင့်ကွန်ပျူတာကိုလိုအပ်တယ်။
ဤလိုအပ်ချက်ကြောင့် Mac တွင် TPM chip မရှိပါကတစ်စုံတစ် ဦး ကဆွဲထုတ်ပြီးသည်အထိ Windows 11 ကို၎င်းတွင်တရားဝင်ဖွင့ ်၍ မရပါ။ parcha ၎င်းသည် ၀ င်းဒိုး ၁၁ အားဤချစ်ပ်အားတောင်းဆိုခြင်းမှကာကွယ်ပေးသည်သို့မဟုတ်၎င်းသည်၎င်းကိုသယ်ဆောင်ရန် "အတုခိုးခြင်း" နှင့်ဆော့ဖ်ဝဲက၎င်းတွင်ထည့်သွင်းထားခြင်းနှင့်သူ့အားတပ်ဆင်ခွင့်ပြုသည်ဟုယုံကြည်သည်။ လွယ်ကူလိမ့်မယ်
Intel Macs တွင် TPM 2.0 standard အတွက်မည်သည့်အခါကမျှထောက်ပံ့မှုပေးခဲ့ခြင်းမရှိဘဲနောက်ဆုံးပေါ် Windows version နှင့်မကိုက်ညီသည်။ အကယ်၍ သင်သည်မိုက်ကရိုဆော့ဖ်မှထုတ်ဝေသောကိရိယာကိုအသုံးပြုပြီးသင်၏ကွန်ပျူတာတွင် ၀ င်းဒိုး ၁၁ ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သောဟာ့ဒ်ဝဲရှိမရှိကိုစစ်ဆေးကြည့်ပါက“ ဒီပီစီက” windows 11 ကိုမ run နိုင်ဘူး"။
သီအိုရီအရအက်ပဲလ်ဟာပရိုဆက်ဆာကိုသုံးပြီး TPM 2.0 အထောက်အပံ့ကိုဖွင့်ဖို့အတွက် Intel ရဲ့စက်တွေမှာ firmware ကို update လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် Apple က Intel Macs ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရပ်တန့်နေပြီး M1 Macs အသစ်များတောင်မှမည်သည့်ဗားရှင်းကိုမှအထောက်အပံ့မပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Windows ကို.
တစ်နည်းပြောရလျှင် Windows 11 ကို Mac ပေါ်တွင်အသုံးပြုလိုသူများအတွက်ယခုအချိန်တွင်တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာမှာ virtual machine အသုံးပြုရန်ဖြစ်သည်။ boot Camp။ ဒီနှစ်ကျရင် Windows 11 ကိုအခမဲ့ update အဖြစ်ရောက်ရှိလာလိမ့်မယ်။ ထိုအတောအတွင်းသင်သည် beta ပရိုဂရမ်နှင့်ဆက်သွယ်နိုင်သည် Windows ကို Insider operating system အသစ်ကိုယခုစမ်းသပ်ရန်။ ကွန်ပျူတာတစ်လုံးမှာပေါ့။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ငါက Mac ကပါ » Mac OS X ကို » Bootcamp » Windows 11 သည်မည်သည့် Intel Mac နှင့်မှအဆင်ပြေမည်မဟုတ်ပေ၊
Daniel Corral ဟုသူကပြောသည်
အကယ်၍ ၎င်းကို Intel နှင့် Mac များ၌တပ်ဆင်နိုင်သည်ဆိုလျှင်၊ ကျွန်ုပ်သည် Windows 11 ပါသော MacBook Pro မှဤထင်မြင်ချက်ကိုမတုန့်ပြန်သေးပါ။ ကျွန်ုပ်မပြောနိုင်ပါ။ သို့သော်ဖြစ်နိုင်လျှင် :) အားလုံးကိုနှုတ်ခွန်းဆက်ပါသည်။
Daniel Corral ကိုပြန်သွားပါ
မင်္ဂလာပါ။ Daniel Corral သည် Windows 11 ကို Intel နှုတ်ခွန်းဆက်စကားဖြင့်မည်ကဲ့သို့ download ဆွဲရမည်ကိုသင်တစ်နည်းနည်းဖြင့်ညွှန်ကြားလိမ့်မည်။
Jorge Nestor D'Antiochia ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားသော ကောင်းမွန်သော open source လည်ပတ်မှုစနစ်များသို့ သွားပါမည်။
Jorge Néstor D'Antiochia ကို အကြောင်းပြန်ပါ။
Mark Gurman က M1s နဲ့ MacBook Pros အသစ်တွေရလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့တယ်
အက်ပဲလ်စောင့်ကြည့်ရေး ECG ကိုတရုတ်ကတရားဝင်အတည်ပြု